Sina: te-ho lasa “mpiasam-panjakana voatsolotra” ny zazavavy kely mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2009 13:39 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Français, বাংলা, Italiano, Español, Aymara, bahasa Indonesia, English
Nanadihady ny mpianatra madinika ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ny amin'ny tanjon'izy ireo eo amin'ny fiainana ny Gazety mpivoaka isan'andro Southern Metropolitana any Guangzhou ny andro voalohan'ny taom-pianarana vaovao any Sina (1 Septambra), Southern Metropolitan Daily.Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny iray amin'izy ireo fa ny nofiny dia ny ho”lasa mpiasam-panjakana”. Raha nanontany azy ny mpanao gazety hoe mpiasam-panjakana inona no tianao, dia namaly izy hoe ” ho lasa mpiasam-panjakana voatsolotra”.Manana tombontsoa betsaka ny mpiasam-panjakana voatsolotra.”
Efa mandeha amin'ny youtube izao ilay horonantsary, notakonana ny endrik'ilay zazavavy kely:
Niely nanerana ny haino aman-jery sy ny blaogy Sinoa ity valinteny ity. Mihevitra ny sasany hoe fanamarihana kisendrasendra ihany ny an'ity zaza, fa maro kosa no nitazona ny heviny fa fitaratry ny tena zava-misy eo amin'ny fiaraha-monina izany. Naneho karazana fanamarihana vitsivitsy ny resaka ao amin'ny ifeng :
Tsy tokony ho raisintsika matotra ny tenin-jaza.
Mampalahelo sy mahatezitra izany, miha mahafantatra ny lafy ratsin'ny fiaraha-monina ianao rehefa miha-lehibe.
mino aho fa efa fantatry ny ankizy amin'izao fotoana izao ny tena zava-misy marina. Tsy misy intsony ny soatoavina ampianarina any an-tsekoly. Raha manaraka ny fitsipika ianarana any an-tsekoly ianao ary miezaka ny hiaina izany ao anatin'ny fiaraha-monina, ny sisa anjaranao dia ny mody any an-trano.
Miteny ho azy ny marina! Tokony handini-tena ny olon-dehibe. Mampalahelo ahy izany.
Ao anatin'ny tantaran'ny Akanjo Vaovaon'ny Amperora, zaza iray ihany no milaza ny marina. Ry mpanabe, aza mandainga amin'ny tenanareo intsony. Nanomboka tany amin'ny sekoly ambaratonga fototra ianareo no nampianatra ny ankizy ho lasa mpiasam-panjakana voatsolotra sy ho mpanao afera.
Ny mpanoratra mavitrika ato amin'ny serasera i Shihua (施化),tao amin'ny lahatsoratra vao haingana, dia nanamarika ny momba ny valintenin'ilay zazavavy mpianatra , ary nanome anarana ny fipariahan'ny trangan-javatry ny kolikoly any Sina ho ny hoe ” fahefam-bahoaka nasionaly” tsy misy fetrany:
Ity zaza enin-taona no nahasahy nilaza ny zavatra tsy sahin'ny olon-dehibe lazaina. Zavatra roa no asehon'izay. Voalohany, ny mpiasa-panjakana ihany no manana fahefana ny hanao kolikoly (tsolotra); ny mpiasam-panjakana voatsolotra ihany no misy fa tsy misy ny hoe vahoaka voatsolotra. Faharoa, raha te hankafy zavatra tsara ianao any Sina, ny làlana tsara indrindra dia ny lasa mpiasam-panjakana.
Mila lasa mpiasam-mpanjakana aloha ianao raha te hiditra hanao kolikoly, izany hoe, ny fanatanterahana ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” . Nefa midika hoe fahefan'ny vahoaka maro ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” , fa tsy hoe fahefan'ny rafitry ny governemanta. Tsy fanaraha-maso ataon'ny governemanta amin'ny vahoaka sy ny mponina akory ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” , fa fiarovana ny fahefan'ireo tsy miankina.
Tsy afaka mivelatra ho azy amin'izao ny fananana tsy miankina amin'ny fanjakana satria efa ela i Sina no nampiasa ny drafitra ara-toekarena voafaritra sy ara-tsosialy. Ny fahefam-bahoaka sy ny fitsipika no fanehoana mibahan-toerana… Mila eken'ny fanjakana avokoa ny hetsika rehetra ataon'ny mponina sy ny mpanao afera; manana fahefana tsy misy fetrany ny fanjakana. Na izany aza, ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” , izay natao hiaro ny zon'ny tsy miankina tany am-boalohany, dia nanitatra ny hatendàny sy ny kolikoly ho amin'ny tontolon'ny tsy miankina.
Diso avy hatrany ny fandikàna ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” raha tsy nalaina avy amin'ny dingana ara-demokratika izy, fa nofehezin'ny antoko politika tokana mavesa-danja. Miara mitoetra amin'ny fanatanterahana mihoampampana ny ” fahefam-bahoaka nasionaly” ny kolikoly, fa havitsiana amin'ny fahefan'ny tsy miankina.